Tato-tanana feno, voavaha daholo ny fisalasalanao! | Ny fanaovana tatoazy
Tato-tanana feno, voavaha daholo ny fisalasalanao!
Nat Cherry | | Tatoazy amin'ny sandry
ny tombokavatsa Ny tatoazy feno sandry dia iray amin'ny tatoazy mahazatra indrindra, saingy tsy dia latsa-danja noho izany izy ireo. Na miaraka amina endrika maromaro atambatra aoriana na miaraka amina endrika tsy manam-paharoa noforonina tamin'ny rangotra, dia karazana ranomainty mahaliana sy mahavariana izy ireo.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hamaha ny fisalasalanao rehetra momba izany izahay tombokavatsa: inona no karazana misy, inona ny endrika tsara indrindra, ohatrinona ny vidiny ...
1 Karazana tombokavatsa amin'ny sandry iray manontolo
1.1 Tatoazy amin'ny sandry na tanany feno
1.2 Tatoazy amin'ny sandry na sandry amin'ny antsasa-tanana
1.3 Tatoazy amin'ny sandry
1.4 Fepetra japoney, tontolo iray manontolo
2 Inona no endrika tsara indrindra?
3 Ohatra vitsivitsy amin'ny tatoazy amin'ny sandry iray manontolo
4 Maharitra hafiriana ny fanaovana tatoazy amin'ny sandry iray manontolo?
5 Ohatrinona ny vidin'izy ireo?
Karazana tombokavatsa amin'ny sandry iray manontolo
Tato-tanana feno o tatoazy tanany
Fantatra amin'ny teny anglisy amin'ny teny anglisy, tatoazy tanany (ara-bakiteny 'tatoazy tanany', noho ny antony mazava), Ireo tombokavatsa ireo dia miavaka amin'ny fisaronana ny sandry iray manontolo, manomboka amin'ny soroka ka hatrany amin'ny hato-tanana. Na dia sarotra aza ny manarona azy ireo (raha hanao izany tanteraka dia safidy tokana ihany no ataonao: manaova akanjo lava) dia karazana tatoazy malaza be izy ireo.
Tatoazy antsasa-tànana o tapany tanany
Araka ny lazain'ny anarany, ny tombokavatsa antsasa-tànana dia manomboka amin'ny soroka hatramin'ny kiho. Safidy voafintina kokoa izy ireo noho ny sandry feno, ary indraindray dia fijanonana fotsiny izy ireo mandra-panaovana tombokavatsa ny sandry iray manontolo (sarotra ny manohitra raha vao manomboka ianao).
Tatoazy antsasaky ny sandry… nivadika fotsiny. Ny forearm dia iray amin'ireo faritra be pitsiny indrindra sy tsy maharary indrindra amin'ny vatana raha amin'ny resaka tatoazy. Eken'izy ireo ihany koa ny tombokavatsa izay manarona ny lamosina sy ny alohan'ilay tànany na ny iray amin'izy roa ihany. Safidy mety tsara ho an'ny vao manomboka izy io, na dia tsy maintsy lazaina aza fa tsy mora ny manarona.
Fepetra japoney, tontolo iray manontolo
Ny Japoney, noho ny tantaran'izy ireo amin'ny tombokavatsa, dia nanana ny fomba iantsoany ny famaritana ny tombokavatsa sandry. Raha mikasa ny hahazo ny iray amin'izy ireo ianao dia tsara ny mijery azy ireo:
Nagasod: ny tatoazy midadasika indrindra, izay takatsika amin'ny sandriny iray manontolo, satria hatramin'ny hatony hatramin'ny hatony no ahatongavany.
hikae: Na dia fantatra amin'ity anarana ity aza ny ampahany amin'ny tratra manao tombokavatsa ka hatramin'ny sternum (mahazatra dia ajanona tsy misy tombokavatsa io faritra io), mahazatra be ny hikae raha tafiditra ao amin'ny tatoazy feno sandry.
Gobu: Ity tatoazy ity dia mitana faritra dimy amin'ny tatoazy feno sandry, amin'ity tranga ity eo ambonin'ny soroka.
Shichibu: Toy ny tamin'ny tranga teo aloha, kely kokoa fotsiny izy, satria faritra 7 amin'ny folo izy ireo, izany hoe, ny ranomainty dia avy amin'ny soroka mankamin'ny soroka.
Inona no endrika tsara indrindra?
Ny famolavolana tatoazy feno sandry feno dia miankina betsaka amin'ny haben'ny nofidinao farany. Noho izany, ny tatoazy antsasaky ny tanany dia tsy mangataka famolavolana mitovy amin'ny tanany feno. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny artista tatoazy amin'ireto tranga ireto. Miezaha mitady singa tianao hampidirina amin'ny tatoazy sy fomba mahazatra manerana ny sandry.
Andao haka ohatra iray: amin'ny tatoazy mahazatra izay mibodo ny sandry iray manontolo, afaka mifidy ny fomba japoney isika. Mba hanampiana ny mpanakanto tatoazy hamoronana endrika izay ahatsapantsika fa fantarina tanteraka dia tsy mila mitady sary fotsiny isika, fa mieritreritra ireo singa tadiavintsika hiseho ihany koa. Ho singa lehibe amin'ny ohatra asehontsika, dia hisafidy karpa isika ary hiaraka aminy koa amin'ny singa hafa amin'ny fomban'ny Japoney: onja, voninkazo serizy ary krisantimo. Hanapa-kevitra ihany koa isika raha mila izany amin'ny loko na amin'ny mainty sy fotsy.
Arakaraka ny hanomezantsika ilay mpanao tombokavatsa ho an'ny endriny no hahamora kokoa ny famoronana tatoazy tonga lafatra antsika. Na izany na tsy izany, raha manana hevitra ilay mpanakanto tatoazy dia henoy izy, rehefa dinihina tokoa, matihanina izy!
Ohatra vitsivitsy amin'ny tatoazy amin'ny sandry iray manontolo
Toa tsara ny fomba nentim-paharazana ho an'ny tatoazy sandry izay raha vao jerena dia misy singa toa tsy misy iraisana.
Trano, voninkazo serizy, samurai ary lamina voninkazo na géometrika izay maka tahaka ny kimono ... Ny fomba japoney manerana ny sandry dia tena mahasarika maso sy mahery.
Hevitra iray hafa amin'ny fanaingoana ny tananao iray manontolo ny fampiasana endrika geometrika. Na amin'ny fomba madio sy tsotra na mifoha ny mandala dia tena hypnotic ny valiny.
Ny fomba tena izy dia mahatalanjona ihany koa raha misafidy endrika lehibe izay mandray ny sandry iray manontolo ianao. Ny biby, ny olona, ​​ny sary ary ny seho dia afaka miaina amin'ny alàlan'ny hoditrao.
Farany, ny felam-boninkazo dia mijery tsara ihany koa amin'ny tombokavatsa misy soroka. Na zava-misy izy ireo, miloko, mainty sy fotsy, impressioniste na pointillist, tokana na maro mitambatra, ny tatoazy miaraka amin'ny voninkazo ho protagonista dia ho azo antoka.
Maharitra hafiriana ny fanaovana tatoazy amin'ny sandry iray manontolo?
Miankina be dia be izany, ary indrindra amin'ny mpanaingo tombokavatsa tsirairay, na dia ny zavatra mahazatra indrindra aza dia maharitra folo fotoam-pivoriana. Amin'ny maha toerana be dia be azy, ny sandry dia tsy azo atao tombokavatsa mandritra ny fotoana iray. Mila maromaro ianao ary misaraka mba hahafahanao miasa manoritra, manaloka, loko ... ary omeo fotoana hanasitranana kely eo anelanelan'ny fotoam-pivoriana.
Ohatrinona ny vidin'izy ireo?
anefa Miankina amin'ny lafin-javatra maro (ohatra, ny fomba nangatahana ny artista tatoazy, ny firenena misy anao, raha mainty sy fotsy izy na miloko, raha endrika izy io ...) Azonao atao ny manantena fa ny tombokavatsa amin'ny sandry antsasaky ny sandany dia handoa anao Ariary iray alina. Ny sandry feno dia mety mihoatra ny roa arivo.
mazava ho Ireo vidiny ireo dia manondro, ny mpanaingo tatoazy tsirairay avy dia hahatonga anao handoa izay heveriny fa ara-drariny.
Ny tatoazy feno sandry dia tena milay, miampy, manana safidy an'arivony mifanaraka aminao ianao. Lazao aminay, manana tombokavatsa amin'ity fomba ity ve ianao? Aza hadino ny milaza aminay ny zavatra tadiavinao amin'ny hevitra iray!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Tatoazy amin'ny sandry » Tato-tanana feno, voavaha daholo ny fisalasalanao!
Tatoazy an'ny kamio
Tatoazy hahatsiarovana ny raim-pianakaviana nodimandry